स्वास्थ्य पेजपहिलो पटक यौनसम्पर्क गर्ने उचित उमेर कुन हो? - स्वास्थ्य पेज पहिलो पटक यौनसम्पर्क गर्ने उचित उमेर कुन हो? - स्वास्थ्य पेज
बिबिसी- पहिलो पटक यौनसम्बन्ध राख्ने उमेर कुन हो? यसबारे किशोरावस्थामा संसारभरि सबैमा उत्सुकता र अन्योल छ।नेपाल र पूर्वीय संस्कृतिमा विवाहपूर्व यौनसम्पर्कलाई स्वीकार्य मानिँदैन। पाश्चात्य समाजमा भने त्यस्तो कुनै प्रतिबन्ध छैन।